Nokuba umhla wokuhanjiswa uchanekile okanye awusoloko uhlala uyintloko enkulu
Ngaba sisabandezeleka yintloko yokungakwazi ukuhambisa ngexesha? Ngaba sisasokola kwiintlungu zokuhanjiswa kade? Ngaba sisahleli kwizishelufu ezingenanto kanye ngexesha lonyaka? Sifanele senze ntoni? Yamkela uthe cwaka okanye umbombozele? Okanye usole ilizwe? Hayi, hayi, hayi, sinokubheja ...
Uyichaza njani impahla yomsebenzi?
Ukuba sisacinga ukuba iimpahla zomsebenzi zezomsebenzi kuphela, ukuba sisacinga ukuba iimpahla zomsebenzi wesintu azinakho ukusebenzisa naziphi na izinto ezisefashonini okanye imibala eqaqambileyo, ke siphelelwe lixesha kunye neThe Times, Umbala weempahla zomsebenzi akufuneki zitshintshwe ...
Ungayikhetha njani iZipper?
Ukukhetha uziphu kufuneka unike ingqalelo: (1) Ukhetho kufuneka lusekwe ekusetyenzisweni kwengubo, indlela yokusetyenziswa kunye nolondolozo, ubukhulu, ukusebenza kunye nombala welaphu, kunye nokusetyenziswa kweziphu. Iiziphu ezincinci kufuneka zisetyenziselwe iimpahla ezingaphucukanga. (2) Ukuncipha, ...
Malunga nemvelaphi yohlobo "lwemozulu Trend"
Njengokuba amaqondo obushushu ehlabathi enyuka, enza umonakalo omkhulu emhlabeni esihlala kuwo. Okokuqala, amandla obushushu aziswa bubushushu obonyukayo aya kubonelela ngamandla amakhulu e-kinetic emoyeni naselwandle, ngaloo ndlela esenza iziphango ezinkulu, ezinkulu kakhulu, iinkanyamba, iitsunami kunye nenye intlekele ...
Ilaphu lomqhaphu ligama eliqhelekileyo lazo zonke iintlobo zelaphu lomqhaphu
Umqhaphu wethu oqhelekileyo: (1) umqhaphu: kanye njengoko igama layo lithetha ukuba yonke ikotoni iyinto eluhlaza, yalukiwe ibe shushu, ifunxwe ukufuma, ukumelana nobushushu, ukumelana nealkali, impilo njl. Isetyenziselwa ukwenza ifashoni ngakumbi, ukunxiba nje, iimpahla zangaphantsi neehempe. Izibonelelo zayo kulula ukuzigcina zifudumele, zithambile kwaye zisondele
Iindlela ezizinzileyo zeMveliso
Siyakholelwa ukuba sinendima ekufuneka siyidlalile xa kukhuselwa okusingqongileyo kwaye ke, e-V-Sheng, sizabalazela ukusebenzisa iindlela ezizinzileyo zemveliso. Umzi mveliso unikezelwe ukunciphisa ifuthe lokusingqongileyo kwimveliso yabo kunye nokuqinisekisa ukuba zonke iimveliso zikhuselekile kwaye zisulungekile ...
Sebenzisa kwakhona ukuSebenzisa kwakhona ukuNciphisa-3R
Ubomi bemveliso yefayibha ikakhulu buqukethe izigaba ezithandathu: Manufacture Ukuveliswa kweFayibha ~ ManufactureUkuveliswa kweFabric ~ ManufactureUkuveliswa kweGarment ~ ④Ukuthengisa ~ ⑤Ukusebenzisa ~ hUkulahla. iifayibha ezintsha. E-China, la ...